वित्तीय विवरण विश्लेषण गरेर शेयर खरीद बिक्री गर्दै लगानीकर्ता | Notebazar
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन, कति तोकियो भाउ ? अब पीसीआर परीक्षण गर्न कुनै शुल्क नलाग्ने, निःशुल्क परिक्षण गर्न परमादेश जारी तीन करोड अकूत सम्पत्ति कमाएको अभियोगमा सिडिइ शर्माविरुद्ध मुद्दा सिटिजन्स बैंकको १११ औं शाखा दाङ्गको तुलसीपुरमा नेप्सेमा २० लाख ७ हजार कित्ता शेयर सूचीकृत
वित्तीय विवरण विश्लेषण गरेर शेयर खरीद बिक्री गर्दै लगानीकर्ता
काठमाडौं। २८श्रावण, २०७७, बुधबार / Aug 12, 2020 16:22:pm
शेयर बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरुले गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्न थालेपछि लगानीकर्ताले समेत विवरण विश्लेषण गरेर खरीद बिक्री गर्न थालेका छन् ।
हालसम्म वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेका कम्पनीहरुले मिश्रित प्रकारको विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । कोरोना कहरकाबीच पनि कतिपय कम्पनीले आकर्षक नाफा बढोत्तरी गरेको विवरण प्रकाशित गरेका छन् भने कतिपयको प्रगतिमा वाधा पुगेको देखिन्छ ।
गत आर्थिक वर्षमा नाफा कमाएका कम्पनीको शेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण देखिएको छ । त्यस्तै केही समय अगाडि आईपीओ जारी गरेर सूचीकृत भएका नयाँ कम्पनीहरुको शेयर मागसमेत बढेको छ ।
अझै अधिकांश वाणिज्य बैंक र ठूला कम्पनीहरुको वित्तीय विवरण आउन बाँकी रहेकाले शेयर लगानीकर्ता पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । प्रकाशित भएका कम्पनीहरुको विवरणको आधारमा वित्तीय विवरण प्रकाशित नगरेका कम्पनीको आँकलनमा पनि लगानीकर्ता जुटेका छन्।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लकडाउनको प्रभाव मिश्रित रुपमा देखिएकाले पनि लगानीकर्ताहरु सबै कम्पनीहरुको नाफा प्रभावित नहुनेमा विस्वस्थ देखिएका छन् । सूचीकृत कम्पनीहरुले अहिले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणको आधारमा लाभांश घोषणा हुने भएकाले पनि लगानीकर्ताहरु लाभांशको लेखाजोखामा समेत लागेर शेयर खरीद बिक्रीमा केन्द्रित हुन थालेका छन् ।
बुधबार नेप्से १.५१ अंकले बढेर १ हजार ४ सय २५ विन्दुमा बन्द भएको छ । यसदिन १८८ वटा कम्पनीको ३० लाख ३२ हजार कित्ता शेयर ९५ करोड १९ लाख रुपैयाँमा खरिद बिक्री भएको छ । कारोबारमा आएकामध्ये ४५ वटाको शेयर मूल्य बढेको छ भने ८५ वटाको घटेको छ। त्यस्तै १८ वटा कम्पनीको स्थिर रह्यो ।
बुधबारको कारोबारमा ६ समुहको सूचक उकालो लागेको छ। बैंक, बीमा र लघुवित्तका शेयरमा बढी आकर्षित छन्। । सबैभन्दा धेरै निर्जीवन बिमा समूह ३९।०८ अंकले बढेको छ । वाणिज्य बैंक समूहको सूचक ३।८१ विन्दुले माथि लागेको छ ।
बुधबारको कारोबारमा साधना लघुवित्त र घलेम्दी हाइड्रोपावरको शेयर मूल्य ९ प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको छ । आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स, युनाइटेड इन्स्योरेन्स, नेपाल बंलादेश बैंक, युनाइटेड फाइनान्स लगायतको शेयर मूल्य बढेको छ ।
युनियन हाइड्रोपावरको शेयरमूल्य सबैभन्दा धेरै ६।५ प्रतिशतले घटेको् छ । आँखु खोला हाइड्रोपावर, नेपाल फाइनान्स, गुँरास लघुवित्त तथा पोखरा फाइनान्स लगायतको शेयरमूल्य घटेको छ।
सबैभन्दा बढी शेयर कारोबार युनाइटेड इन्स्योरेन्सको भएको छ । कम्पनीको ६ करोड १६ लाख ६० हजारको शेयर कारोबार किनबेच भयो । नेपाल पुर्नबीमा कम्पनीको ६ करोड ३ लाख, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको ४ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ।
समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।
प्रि-ओपनिङ्गमा २१ कम्पनीको शेयरमूल्य बढ्यो, नेप्से सूचकमा सुधार 10 hours ago
नेप्से लगातार तेस्रो दिन घट्यो, हाइड्रोको शेयर बढेपछि आईपीओमा घाटा ब्यहोरेकाले पाए राहत 1 day ago
नेप्से दोस्रो दिन पनि घट्यो, जलविद्युत कम्पनीको शेयरमा भने आकर्षण2days ago
'प्रोफिट बुकिङ्ग'ले शेयर बजारमा करेक्शन, फाइनान्स र विकास बैंक लगानीकर्ताको रोजाईमा3days ago
प्रि-ओपनिङमा एक दर्जन कम्पनीको शेयर मूल्य चार प्रतिशत धेरैले बढ्यो3days ago
यी हुन् शेयर बजारका सस्ता कम्पनी, आधा दर्जनको भाउ अंकित मूल्यमै3days ago
शेयर बजारमा सुरक्षित लगानीका लागि जान्नैपर्ने न्युनतम लगानी रणनीतिहरु3days ago
जलविद्युत कम्पनीहरुको माग बढ्दा अधिकांसको मूल्य र कारोबार बढ्यो 1 week ago
सानिमा जनरलको ३० करोडको आईपीओ असोज २१ गते खुल्दै
पशुपति क्षेत्र विकास कोषले एक अर्बको अक्षय कोष स्थापना गर्ने
उखु किसानलाई भुक्तानी गर्न सरकारी अनुदानको २१ करोड निकासा
आईपीओमा नयाँ रेकर्ड, जनरल इन्स्योरेन्समा ८ लाख बढीले गरे आवेदन
मनीग्राम र आइएमई पेवीच डिजिटल रेमिट्यान्स सेवा विस्तार सम्बन्धि सम्झौता
नेप्से लगातार तेस्रो दिन घट्यो, हाइड्रोको शेयर बढेपछि आईपीओमा घाटा ब्यहोरेकाले पाए राहत
राष्ट्र बैंकले एक अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ मुद्दती निक्षेपमा लगानी गर्ने
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन, कति तोकियो भाउ ?
अब पीसीआर परीक्षण गर्न कुनै शुल्क नलाग्ने, निःशुल्क परिक्षण गर्न परमादेश जारी
बागलुङका बाढी पहिरो पिडितलाई प्रभु बैंकको नगद सहयोग
तीन करोड अकूत सम्पत्ति कमाएको अभियोगमा सिडिइ शर्माविरुद्ध मुद्दा
सिटिजन्स बैंकको १११ औं शाखा दाङ्गको तुलसीपुरमा